समाजवाद : कसरी र कहिले ? « Janata Samachar
नेपालको लगायत आजका धेरै संसदीय व्यवस्थाहरु आधारभूत रुपले पुँजीवादको सेवामा छन् । तर, संसदीय व्यवस्थाको सारभूत चरित्र यस्तो भएका कारण यसो भएको होइन । यसो हुनुको कारण के हो भने हाल पुँजीपति वर्ग हरेक हिसाबले वलियो छ र यसले समाज र राज्यलाई आफ्नो अधिनस्त राख्न सफल भएको छ । यसले पार्टी सञ्चालन, पार्टी नेता छनोट, उमेद्वार छनोट, निर्वाचन आदिमा निर्णायक भूमिका खेल्दछ ।
–डा खगेन्द्र प्रसाई
समाजवाद र संसदीय लोकतन्त्रको सकारात्मक सम्बन्धका वारे दुईथरी सन्देह देखिन्छन् । पहिलो सन्देह वुर्जुवा कित्ताको हो । कतिपयलाई के लाग्छ भने संसदीय प्रणाली र कम्युनिस्ट सिद्वान्तबीच पानी बाराबारको सम्बन्ध छ र यिनीहरू एकअर्काका ‘एन्टी–थेसिस’ हुन् किनकि हिजोको सोभियत युनियन, चीन, उत्तर कोरिया, क्युवा, भियतनाम आदिमा यस्ता अभ्यास भएका हुन् र छन् । त्यस्तै, कम्यनिष्ट विश्वदृष्टिकोण र लोकतन्त्रमा अन्तरनिहित तत्व एकअर्काका परस्पर विरोधी रहिआएको दावी पनि गर्ने गरिएको छ । तर, यस्ता दावीलाई इतिहासका तथ्यहरूले सहजै खारेज गर्दछन् । जस्तै, सन् १९१९ मा जर्जीयामा मेन्सेभिक पार्टी संसदमा ८१५ भन्दा बढी मत ल्याएर सरकारको नेतृत्वमा पुगेको थियो र असाधारण रुपले लोकप्रिय र प्रभावकारी कार्यक्रम सफलताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको थियो । यूरोपको सानो देश सान मारिनोमा संसदीय प्रणालीअन्तर्गत सन् १९४५ देखि १९५७ सम्म कम्युनिस्ट र समाजवादीहरूको गठबन्धले शासन गरेको थियो । दास्रो विश्वयुद्धपछि त संसारका कतिपय देशहरूमा संसदीय प्रणालीअन्तर्गत कम्युनिस्ट या वाम गठबन्धनहरू सरकारमा पुगेका थिए । १९७० मा यूरोकम्यूनिज्मका नाममा यूरोपका कतिपय देशका संसदमा कम्युनिस्ट पार्टीको उपस्थिति देखिएको थियो । त्यसो भए संसदीय प्रणाली र कम्युनिस्ट पार्टी कसरी एक अर्काका परस्पर विरोधी कुरा भए त ?
तर कतिपय देश र कालमा कम्युनिस्ट पार्टीले संसदीय प्रणालीसँग एन्टी थेसिस को सम्बन्ध राखेको भने साँचो हो । किन यस्तो भयो त रु यो चाहिँ महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यसका अनेक कारण होलान् तर म दुई प्रमुख कारणहरूको यहाँ चर्चा गर्न चाहन्छु । पहिलो कारण आधारभूत रुपले बाह्य थियो । लेनिन र स्टालिनको कालमा सशस्त्र संघर्षलाई क्रान्तिको विधि नमान्ने पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी मानिदैन्थ्यो । त्यस्तो पार्टीलाई प्रतिकृयावादी र संशोधनवादी मानिन्थ्यो । यो कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रियतावादको सिद्वान्त नै थियो । कुनै देशको कम्युनिस्ट पार्टीका लागि शक्तिशाली हुँदै गरेको कम्युनिस्ट राष्ट्रले स्थापित गरेको सिद्वान्त नमान्नु स्वयम मुलधारको कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट एक्लिनु र सम्भावित अवसर गुमाउनु नै थियो । अर्कोतर्फ दोस्रो विश्वयुद्वपछि कम्युनिस्ट र वाम पार्टीलाई पूँजीवादी साम्राज्यवादी शक्तिले संसदीय अभ्यासबाट हिंसात्मक तरीकाले लखेटेएको थियो । संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत बनेका कम्युनिस्ट, वाम या प्रगतिशील सरकारहरूलाई सैनिक कुमार्फत हटाई तिनका ठाँउमा खुनी तानाशाही शासन खडा गरिएका घटना ग्वाटेमालामा १९५४, व्राजिल १९६४, इन्डोनेशियनमा १९६५, चिलीमा १९७३ र अरु अनेक छन् । यी घटना भोगेका र देखेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले संसदीय प्रणालीलाई क्रान्तिको लागि उपयुक्त नभएको निष्कर्ष निकाल्नु अनौठो थिएन र होइन पनि ।
अर्को सन्देह भने आधारभूत रुपले आफूलाई क्रान्तिकारी दावी गर्ने कम्युनिष्ट कित्तामा नै भेटिन्छ । उनीहरुको निष्कर्ष छ स् ससदीय व्यवस्था पुँजीवादी प्रतिकृयावादी या बुर्जुवा व्यवस्था होे । यो दावीमा दुईवटा गम्भीर कमजोरी छन् एक, यसले संसदीय व्यवस्थाको चरित्र र विकासको ऐतिहासिकतालाई बुझ्न सकेको छैन । मार्क्स लगायत त्यो बेलाका कतिपय समाजवादीहरुले तत्कालीन संसदीय व्यवस्थालाई वुर्जुवा प्रजातन्त्र भनेर आलोचना गरे । स्वाभावैले चुन्ने र चुनिने अधिकार व्यक्तिको सम्पत्तिमा आधारित हुने र मजदुरका संगठन तथा पार्टी गैरकानूनी भएको अवस्थामा ती व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र वुर्जुवा नै थियो । तर त्यसपछिका स्वयं मजदरहरूका संघर्षहरूबाट प्राप्त आम मताधिकारमा आधारित निर्वाचन प्रणाली र मजदुरका राजनीतिक पार्टी वैध भइसकेको अवस्थामा संसदीय प्रणालीको राजनीतिक चरित्र वुर्जुवा नभई वर्गीय हिसावले तटस्थ हुन गयो । यो यस्तो अवस्था हो जसअन्तर्गत शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामार्फत मजदुर वर्गले सरकारको नेतृत्व र सञ्चालन गर्न सक्छ । यो गुणात्मक रुपले नै भिन्न अवस्था हो । यो नयाँ अवस्थालाई पुरानै देखिरहनु गैरऐतिहासिक दृष्टिकोण हो । इतिहासमा आफ्नै संघर्षका उपलव्धि र अवसरलाई त्यसको ऐतिहासिक सीमाभित्र स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति व्यापक र बलियो थियो र छ । यस्तो प्रवृत्तिले कुनै परिर्वतनले एकैपटक जनवाद या समाजवाद ल्याउनु पर्थ्यो भन्ने आग्रह राख्दछ र कुनै ऐतिहासिक घटना र प्रणालीलाई यसकारण प्रतिकृयावादी भनिदिन्छ कि यसले तत्काल श्रमजीवी जनताका सवै माग पुरा गरेन या गर्दैन । एकातर्फ यस्तो गैर–ऐतिहासिक दृष्टिकोण राखिरहने, अर्को तर्फ आफ्नो राजनीतिक मार्गदर्शन ऐतिहासिक भौतिकवाद भएको दावी गर्ने प्रवृत्तिबीच अन्तरविरोध छ ।
दोस्रो कमजोरी संसदीय व्यवस्थाई स्वयम्मै पुँजीवादी व्यवस्थाको पर्याय वनाउने कुरासंग सम्बन्धित छ । यो सत्य हो कि नेपालको लगायत आजका धेरै संसदीय व्यवस्थाहरु आधारभूत रुपले पुँजीवादको सेवामा छन् । तर, संसदीय व्यवस्थाको सारभूत चरित्र यस्तो भएका कारण यसो भएको होइन । यसो हुनुको कारण के हो भने हाल पुँजीपति वर्ग हरेक हिसावले बलियो छ र यसले समाज र राज्यलाई आफ्नो अधिनस्त राख्न सफल भएको छ । यसले पार्टी संचालन, पार्टी नेता छनोट, उमेद्वार छनोट, निर्वाचन आदिमा निर्णायक भुमिका खेल्दछ । यो पुँजीवादी युग हो, त्यसकारण संसद पुँजीपतिहरुको संस्था बन्न पुगेको हो ।
यस सन्दर्भमा रोजाको विचार मननीय र उपयोगी छ । १९१८ को सोभियत क्रान्तिसम्वन्धी आफ्नो चर्चित रचना या पम्प्लेटमा लेनिन र त्रोत्स्कीको सर्वहारा अधिनायकत्व र लोकतन्त्रसम्वन्धी मान्यतको खण्डन गर्दै लोकतान्त्रिक विधिमार्फत मात्रै सर्वहारा वर्ग आफ्नो वर्ग अधिनायकत्वका लागि तयार हुने जीकिर गरेकी थिइन् । साँचै भन्ने हो भने लोकतान्त्रिक विधिवाट मात्रै सर्वहारा वर्ग समाजवादको कर्ता बन्न सक्छ । यस अर्थमा संसदीय प्रणाली या लोकतन्त्र समाजवाद स्वयंको अभिन्न अंग वन्छ । तर, समाजवादले हाल प्राप्त भएको लोकतान्त्रिक प्रणाली, जसमा लोकतन्त्र अधिक रुपले आवधिक र औपचारिक छ, लाई विकसित गर्दै लोकतन्त्रलाई तमाम सामाजिक तथा आर्थिक जीवनमा फैलावट गर्छ र मानिसको आम जीवनपद्धति वनाइदिनुपर्छ । यसैलाई मार्क्सवादी आन्दोलनमा लामो समयसम्म सामाजिक जनवाद भनिन्थ्यो जसको आग्रह हो : लोकतन्त्र अब औपचारिक राजनीतिक मात्र नभई मान्छेको आम सामाजिक जीवन र कृयाकलाप वन्नुपर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने मार्क्सले भने जस्तो सर्वहारा आफैमा एउटा वर्ग (class-in-itself) वाट आफ्ना लागि एउटा वर्ग (class-in-itself) मा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अभ्यास गर्दै र वुर्जवा वर्गसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नै बन्न सक्छ ।
मार्क्सवादी आन्दोलनमा लामो समयसम्म सामाजिक जनवाद भनिन्थ्यो जसको आग्रह हो स् लोकतन्त्र अब औपचारिक राजनीतिक मात्र नभई मान्छेको आम सामाजिक जीवन र कृयाकलाप वन्नुपर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने मार्क्सले भने जस्तो सर्वहारा आफैमा एउटा वर्ग (class-in-itself) वाट आफ्ना लागि एउटा वर्ग (class-for-itself) मा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अभ्यास गर्दै र वुर्जवा वर्गसंग प्रतिस्पर्धा गरेर नै वन्न सक्छ ।
मार्क्सवादी कित्तामा हरेक कुराको भौतिक आधार हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मतमा विवाद छैन । इतिहास निर्माणका बारे मार्क्स स्वयं यो सामान्यकृत मत राख्छन् कि मानिसहरूले आफ्नो इतिहास आफै बनाउँछन् तर उनीहरूले आफूले चाहे जसरी आफैंले छानेका अवस्थामा होइन । यो नियम समाजवाद निर्माणको हकमा पनि लागु हुन्छ नै । ऐतिहासिक भौतिकवादको सामान्यकृत नियम अनुसार आफूभित्र उत्पादक शक्तिको विकासको ठाउँ रहुन्जेल कुनै पनि सामाजिक व्यवस्था ढल्दैन, पुँजीवाद पनि ढल्दैन । पुँजीवाद ढल्ने विन्दुमा या संकटमा नपुगी समाजवादको आधार तयार हुंदैन । पुँजीवादमा संकट तब आउँछ जव पुँजीको निरन्तर पुनरउत्पादन हुने या उत्पादक शक्तिको निरन्तर विकास हुने भौतिक अवस्थाको अन्त भएको हुन्छ । त्यस्तै जर्मनविचारधारामा मार्क्स एंगेल्सले समाजमा एकातर्फ सामाजिक बैभवको बृद्धि र अर्को तर्फ मानिसको ठूलो संख्या सम्पति विहिन र दरिद्र हुने अवस्था आएपछि मात्र समाजवादी क्रान्तिको आधार तयार हुने जीकिर गरेका थिए । पूँजीमा पनि मार्क्सले समाजवादका लागि पुँजीवादमा संकट आउनु अनिवार्य शर्त हुने चर्चा गरेका छन् । त्यस्तै, रोजाले श्रमिक वर्ग स्वतस्फूर्त संघर्षमा आउने अवस्था निर्माण भएको अवस्था समाजवादी क्रान्तिको लागि महत्वपूर्ण रुपले आवश्यक भएको तर्क गरेकी छन् । उनको विचारमा इतिहासको वस्तुगत प्रकृया त्यसमा भाग लिन मानिसको विषयगत अवस्थाभन्दा पहिला आउँछ । अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा क्रान्तिकारी अवस्थाले मात्र क्रान्तिकारी चेतनाको आधार बनाउँछ ।
तर पुँजीवादको संकटबाट समाजवाद स्वतः आउदैन । समाजवाद कुनै एजेन्सी या कर्ताका सचेत र यो७शधवसजनावद्ध प्रयत्नवाट मात्र ल्याइन सक्छ । यस्तो एजेन्सी समाजका ती वर्ग या वर्गहरूले बन्दछ जो पुँजीवादका पीडित समुह हुन् र जसले समाजवादमा मात्रै आफ्नो निजी तथा सामुहिक हित देख्दछन् । यी वर्गहरूले आफूलाई आफ्नो वहुसंख्या र चेतनाका आधारमा संगठित गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा, त्यस्ता वर्गहरू छन् ? ती वर्गहरू संगठित छन् ? ती वर्गहरू सचेत छन् ?
काल्पनिक समाजवादका अनेक प्रयोग किन असफल भए त ? सोभियत अभ्यास नै किन लेनिनहरुले भने जसरी अगाडि वढेन ? चीनमा समाजवाद किन माओले सोचे जसरी निर्माण भएन रु नेपालमा समाजवादी आन्दोलन किन नाजुक अवस्थामा छ ?
एैतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिले हेर्दा मानव इतिहासमा चेतनाको भूमिका हुन्छ तर भौतिक अवस्थाभित्र मात्र या भौतिक अवस्थाले दिएका अवसर र सिमाको परिधिभित्र मात्र । वैज्ञानिक समाजवादलाई काल्पनिक समाजवादबाट छुट्याउने एउटा चुरो कुरा यही नै हो । काल्पनिक समाजवादका अनेक प्रयोग किन असफल भए त ? सोभियत अभ्यास नै किन लेनिनहरुले भने जसरी अगाडि वढेन रु चीनमा समाजवाद किन माओले सोचे जसरी निर्माण भएन रु नेपालमा समाजवादी आन्दोलन किन नाजुक अवस्थामा छ रु यी केही व्यक्तिहरुका कारण भएका हुन कि भौतिक अवस्थासँग सम्बन्धित छन् रु मार्क्स र एंगेल्सकै विश्लेषणमा काल्पनिक समाजवादको प्रयोगको असफलता इतिहासको भौतिक प्रक्रियासंग सम्बन्धित थियो ।
(‘फाउण्डेसन फर क्रिटिकल डिस्कोर्स नेपाल’ले रोजा लक्जेमवर्गको १५० औं जन्मजयन्तीको अवसरमा फागुन २२ गते आयोजना गरेको ‘संसद, लोकतन्त्र र समाजवाद’ शीर्षकको सार्वजनिक छलफल कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र)
-डा. खगेन्द्र प्रसाई